Covid-19 အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ဤနေရာတွင် တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့် စိန်ခေါ်မှုများအတွင်း အာရှရှိ ဒေသတွင်း ကြက်ဥလုပ်ငန်းသည် ကြီးမားစွာ ထိခိုက်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီများအတွက် ၎င်းတို့၏ အစုရှယ်ယာများကို ကွဲပြားစေရန် ယခင်ကထက် ပိုမိုအရေးကြီးပါသည်။ ဤအင်တာဗျူးတွင် Nourredine el Molaka ၏ အထွေထွေမန်နေဂျာ၊ SANOVO TECHNOLOGY ASIA သည် ကြက်ဥထုတ်လုပ်သူများသည် အမြတ်အစွန်းကို ထိန်းသိမ်းကာ အဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးနေသော အာရှစျေးကွက်တွင် ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်း လိုက်နိုင်ရန် နှစ်မျိုးလုံးတွင် ကြက်ဥများကို အသွင်ပြောင်းနိုင်ရန် အမျိုးမျိုးသော နည်းလမ်းများဖြင့် ထိုးထွင်းသိမြင်စေပါသည်။
ကြက်ဥနှင့် ၎င်းတို့၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို အခွံဥများကဲ့သို့မဟုတ်သည့် အခြားကဏ္ဍအသီးသီးသို့ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အတွေးအမြင်များကို ကျေးဇူးပြု၍ မျှဝေပေးနိုင်မလား။
“ဒီ Covid-19 အကျပ်အတည်းက ကြက်ဥထုတ်လုပ်သူတော်တော်များများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်ခဲ့ပြီး သူတို့ကို ရှာဖွေဖို့ စိန်ခေါ်နေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ဖြန့်ဝေဖို့ နည်းလမ်းသစ်တွေ၊; သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကြက်ဥကို အားကိုးလို့ မရတော့ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် စက်ပစ္စည်းရောင်းချသူအနေဖြင့် အဆင်သင့်စားသုံးနိုင်သောဈေးကွက်နှင့် လက်လီဈေးကွက်သည် ကြီးထွားလာနေပြီး ၎င်းသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ ဒါကြောင့် အပြင်းအထန် ခံခဲ့ရတဲ့ ကြက်ဥထုတ်လုပ်သူတွေက ဥပမာ စားသုံးရန် အဆင်သင့် စျေးကွက်မှာ ရောင်းချဖို့ ပြုတ်ကြက်ဥတွေကို စတင်ရှာဖွေနိုင်ပြီး ပဲပိစပ်နဲ့ အမျိုးမျိုးသော ဆေးဖက်ဝင်အပင်တွေလိုမျိုး အနံ့အရသာတွေ ထည့်ပေးနိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကြက်ဥအခွံကို ကပ်ထားရုံတင်မကဘဲ ကြက်ဥပြုတ်၊ အပျော့စား၊ ဂျပန်ကြက်ဥ၊ ကြက်ဥအရည်စသည်ဖြင့် အစရှိသည်တို့ကို ဦးတည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက စတိုးဆိုင်အားလုံးမှာ အများကြီးတွေ့နေရတဲ့အရာပါ။ ဒီတော့ ဒါက နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ သင်၏အစုစုကို ကွဲပြားအောင်ပြုလုပ်ပါ။။ "
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြည့်ရန် ဇာတ်ညွှန်းကို တင်ရာတွင် အမှားအယွင်းရှိသည် (ဖိုင်- ~/Views/MacroPartials/_Image.cshtml)
ဒေသအတွင်း ဥထုတ်လုပ်သူများအတွက် အမြတ်အစွန်းကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် မြှင့်တင်ခြင်းတွင် အလိုအလျောက်စနစ်က မည်သို့ပါဝင်နိုင်မည်နည်း။ ဒါ့အပြင် ဘယ်လို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုးနဲ့ ဘယ်ကဏ္ဍတွေမှာ လိုအပ်မလဲ။
"ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဓိက စိန်ခေါ်မှုတွေက လုပ်အားပဲလို့ ထင်ပါတယ်၊ ထုတ်လုပ်သူ တော်တော်များများက automation ကို လိုက်ရှာနေတာကြောင့် automation ကိုကြည့်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်၊ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ တိုးတက်မှု အဆင့်တွေ ကွဲပြားနေတာကြောင့် သူတို့ လုပ်မှာပါ။ အားလုံးမှာလည်း ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းရှိကြပါတယ်။ အလိုအလျောက်စနစ်သို့လွှဲပြောင်း.
အလုပ်သမားနှင့် မသက်ဆိုင်သော နောက်ပြဿနာတစ်ခုမှာ ဇီဝလုံခြုံရေးပြဿနာဖြစ်သည်။ ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံရတာကို ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က ဝက်ထုတ်လုပ်သူတွေ ကြုံခဲ့ရတာကို ကျနော်တို့ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဤသင်တန်းသည် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အမြတ်အစွန်းအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ထုတ်လုပ်သူအများအပြားသည် ယင်းအတွက် အဖြေတစ်ခုအဖြစ် အလိုအလျောက်စနစ်အား ရှာဖွေနေကြပြီး ၎င်းတို့ မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို အလွန်အာရုံစိုက်ကြသည်။ ဇီဝလုံခြုံရေးကို မြှင့်တင်ပါ။ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်ပွားမှုများကြောင့် ၎င်းတို့ကို စျေးကွက်မှ ကွယ်ပျောက်သွားစေနိုင်သည်။ ဒီတော့၊ ဒီအရာတွေက အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ဇီဝလုံခြုံရေးတို့ တွဲနေပြီးတော့ အော်တိုမက်တစ်စနစ်က အဲဒီနေရာမှာ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အလားအလာကို ငါမြင်တဲ့ ဒုတိယမေးခွန်းကို ပြန်သွားပြီး၊ သင့်ဥများသည် စျေးကွက်အတွက် တစ်ပြေးညီဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန် သင်သည် အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် စတင်ရန် လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် အက်ကွဲကြောင်း သို့မဟုတ် ညစ်ပတ်သောကြက်ဥများ စျေးကွက်ထဲသို့ မ၀င်ရောက်စေရန်၊ ကြက်ဥတွင် သွေးကွက်များ အစရှိသည်တို့ကို တားဆီးကာကွယ်ပါ။ ၎င်းကိုကူညီရန် စျေးကွက်တွင် နည်းပညာများစွာ ရှိပါသည်။ SANOVO ဒါပေမယ့် အခြားသော ပေးသွင်းသူများထံမှလည်း ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် မင်းရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ရဲ့ တူညီမှုဟာ အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း အမြင်အာရုံစနစ်တွေနဲ့ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ပေမယ့် နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ စင်ကာပူနဲ့ ကိုရီးယားလိုနိုင်ငံတွေမှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ စက်ရုပ်အလိုအလျောက်စနစ်ဖြစ်ပြီး၊ ဒါပေမယ့် တခြားနိုင်ငံတွေက လိုက်နာဆောင်ရွက်မယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ စက်ရုပ်အလိုအလျောက်စနစ်ကူးပြောင်းမှု။
နောက်တစ်ခုက အဲဒါက အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ အစားအသောက်ဘေးကင်းရေးနှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်; ထိုင်ဝမ်နဲ့ ကိုရီးယားလိုနိုင်ငံတွေက မျိုးဥတွေကို ခြေရာခံဖို့ လမ်းညွှန်ချက်အချို့ကို အကောင်အထည်ဖော်နေတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် SANOVOကြက်ဥခွဲခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ကြက်ဥများကို ခြေရာခံနိုင်စေရန် လုပ်ဆောင်နေသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် ဒီဟာက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို နေရာချပြီး စျေးကွက်ကို မှီဖို့ နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။”
"ဟုတ်တယ်၊ စက်ရုပ်အလိုအလျောက်စနစ်က လူသားတွေလုပ်လေ့ရှိတဲ့ နောက်ဆုံးဥတွေကို ပုံးပုံးထဲထည့်တာ၊ အဲဒီပုံးကို ပြားလိုက်လုပ်ရတာ၊ ဥပမာ- ပြင်းထန်တဲ့ နောက်ကြောင်းပြန်ပြဿနာကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ ခက်ခဲတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်တွေလိုမျိုး၊ လက်တွေ့မှာ၊ ရေရှည်မှာ automation က ကူညီပေးနိုင်တဲ့ အရာတွေ အများကြီးရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ စက်ရုပ်အလိုအလျောက်စနစ်သည် အနာဂတ်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ အရာတွေကို ကောင်းမွန်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ပြီးမြောက်အောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။”
အလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့် ခြေရာခံနိုင်မှု စံနှုန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် ထိုင်ဝမ်နှင့် ကိုရီးယားတို့အကြောင်း သင်ပြောခဲ့သည်၊ ယင်းအကြောင်း ပိုမိုရှင်းပြနိုင်ပါသလား။
"ကောင်းပြီ၊ ကိုရီးယားမှာ ငါတို့တွေ့ခဲ့ရတာက ၂၀၁၆/၂၀၁၇ လောက်က သူတို့မှာ ဒီကြက်ငှက်တုပ်ကွေးဖြစ်ဖူးတယ်၊ ဒီလိုရောဂါမျိုးတွေကို တားဆီးဖို့ သူတို့ဘာတတ်နိုင်မလဲဆိုတာကို စပြီးရှာဖွေခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဇီဝလုံခြုံရေးက လုပ်ငန်းစဉ်မှာ မြင့်မားတယ်။
ကိုရီးယားမှာ ကုမ္မဏီတွေ အများကြီး စလုပ်ခဲ့တယ်။ ခြေရာခံနိုင်မှုစနစ်များကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဒါပေမယ့် ကိုရီးယားဈေးကွက်အတွက်သာ သင့်တော်ပါတယ်။ ခြေရာခံစနစ်များသည် မွေးမြူရေးခြံမှ ကြက်ဥကို အဆင့်သတ်မှတ်သည့်ဌာနအထိ၊ ထို့နောက် ထိုနေရာမှ ဖြန့်ဖြူးရေးစင်တာများအထိ၊ နောက်ဆုံးတွင် လက်လီရောင်းချသူထံ ခြေရာခံနိုင်သည်။ ဒါကို ပုံနှိပ်ခြင်းနဲ့ ပြုလုပ်တာဖြစ်လို့ ထုတ်လုပ်သူတိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကုဒ်တွေ ရှိကြပါတယ်။"
ကြက်ဥများသည် စွယ်စုံရရှိပြီး ပေါင်းစည်းခြင်းကဲ့သို့သော နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ သို့မဟုတ် မရိုးနိစ်နှင့် ကလေးအစားအစာများကဲ့သို့သော အခြားအစားအစာများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အာရှစက်မှုလုပ်ငန်းမှာ ဒီလိုအဖြစ်များတာက ဘာလဲ၊ ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းကို အောင်မြင်နေအောင် တွန်းအားပေးဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲ။
"ကြက်ဥတစ်လုံးကို စွယ်စုံသုံးနည်းနဲ့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သုံးနိုင်လဲဆိုတာကို အံ့သြမိနေတုန်းပါပဲ။ စားသုံးသူတွေရဲ့ အမူအကျင့် အသွင်ကူးပြောင်းရေးဟာ အရေးကြီးတဲ့ အရာတစ်ခုပါ၊ စိုစွတ်တဲ့ စျေးကွက်ကို လျော့နည်းသွားတဲ့အတွက် အပြောင်းအလဲတွေလည်း ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်လီနှင့် စူပါမားကတ်များအတွက်၊ ၎င်းသည် ကြက်ဥပြုပြင်ခြင်းနှင့် ကြက်ဥကဲ့သို့သော နည်းလမ်းများစွာဖြင့် အသုံးပြုခြင်းကို ပိုမိုတွန်းအားပေးမည်ဖြစ်သည်။ အသင့်စားထုတ်ကုန်များ.
ဒါ့အပြင် ကြက်ဥအသုံးပြုတဲ့ ဆော့စ်အမျိုးမျိုးကိုလည်း စားသုံးမှု တိုးလာမယ်။ ဥပမာ ဂျပန်မှာ မာနိစ် စားသုံးမှုကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့ အာရှဒေသတွေအထိ ကျဆင်းသွားမယ် ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုရဲ့ သက်ရောက်မှုကို လျှော့မတွက်သင့်ပါဘူး၊ ဒါက လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတော်တော်များများကို ဖိအားတွေ အများကြီးပေးပြီး တစ်ခါသုံးဝင်ငွေနဲ့ မတူတဲ့အဆင့်ကို ပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ် လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ပြန်ကောင်းလာဖို့ အချိန်ယူရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီကနေ။"
Cage-free သည် ဆက်တိုက်ကြားယောင်နေသော စကားလုံးဖြစ်သည်။ အမြတ်အစွန်းမဆုံးရှုံးဘဲ ဒီလုပ်ငန်းဘက်ကို ရွေ့နေတာကို သင်ဘယ်လိုမြင်လဲ၊ သင်နဲ့တူတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ၊ SANOVOဒီပွဲတွေ ၊
“ကျွန်တော် အလုပ်စလုပ်တုန်းကပေါ့။ SANOVO လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များစွာက ကျွန်ုပ်သည် နယ်သာလန်နှင့် ဘယ်လ်ဂျီယံတို့ကို အရောင်းမန်နေဂျာတစ်ဦးအဖြစ် ပြုစုခဲ့ပြီး ထိုအချိန်တွင် လှောင်အိမ်များမှ လှောင်အိမ်ကင်းစင်ခြင်းသို့ ကူးပြောင်းခြင်းစတင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ကို အနည်းနှင့်အများ အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သော အစိုးရများက စီမံကွပ်ကဲခဲ့သည်။ ထိုဦးတည်ချက်။
အာရှမှာ ထုတ်လုပ်သူအားလုံးကို အဲဒီဦးတည်ချက်အတိုင်း မောင်းနှင်ဖို့ အစိုးရ စည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းစနစ် မရှိဘူးလို့ ကျနော်မြင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ပိုနည်းတယ် ထင်ပါတယ်။ စားသုံးသူမောင်းနှင်ခြင်း။ဤပစ်မှတ်စျေးကွက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေသည့် ထုတ်လုပ်သူအနည်းငယ်ကို သင်တွေ့မြင်ရသည့်နေရာ။
ဒါကြောင့် ဒီဈေးကွက်ဟာ ထူးထူးခြားခြား ဈေးကွက်တစ်ခု ဖြစ်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတယ်၊ ဥရောပမှာ ရှိတဲ့ အာရှနဲ့ တူညီတဲ့ အတိုင်းအတာအထိ ရောက်မယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းတို့ပစ်မှတ်ထားလိုသော စျေးကွက်ကို ရွေးချယ်နိုင်ခြင်းမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိမည်ဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ခုက ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ ရင်တွင်းပူစရာ ကိစ္စပါ။ SANOVO ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် စက်ကိရိယာများကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ရန် အမြဲမပြတ်ကြည့်ရှုနေပြီး ၎င်းတို့ကို မည်သို့အသုံးပြုနိုင်သည်ကို တွေ့မြင်နေပါသည်။ စွမ်းအင်နည်းပြီး ရေကို ချွေတာပါတယ်။"
Nourredine el Molaka ၏ အထွေထွေမန်နေဂျာ၊ SANOVO အာရှနည်းပညာ
မူရင်း podcast အင်တာဗျူးအပြည့်အစုံကို နားဆင်လိုပါက လင့်ခ်ကို နှိပ်ပါ။ https://www.youtube.com/watch?v=YvYQ-1KEHhE